Kutanga Kufarira - Geofumadas
Supermap - yakasimba 2D uye 3D GIS yakazara mhinduro
Supermap GIS inogara kwenguva refu GIS mupiki webasa aine chinyorwa chenguva kubva payakatanga mune dzakawanda mhinduro mumamiriro epasi. Iyo yakavambwa mu1997, neboka revanyanzvi nevatsvagiri nerutsigiro rweChinese Academy yeSainzi, hwaro hwe ...
Geospatial - GIS, kuororwa
Migumisiro yekuchinja kubva kuArmMap kusvika kuArgGIS Pro
Inofananidzwa neiyo Legacy vhezheni yeArcMap, ArcGIS Pro ndeye inonzwisisika uye inofambidzana application, inorerutsa maitiro, visualizations, uye inoenderana kune mushandisi kuburikidza neyakagadziriswa maitiro; Unogona kusarudza theme, module module, zvinowedzera, uye haufanire kunetseka nezvekubvisa kare kana paine nyowani nyowani. Chii chimwe chatinogona kutarisira ...
Mharidzo uye mavhidhiyo ekugadzira ne Screencast-o-matic uye Audacity.
Kana iwe uchida kuratidza chishandiso kana maitiro, vazhinji nyanzvi vanotendeukira kumavhidhiyo tutorials pamapeji akakosha pane iyo nyaya, ndosaka avo vakazvipira kugadzira zvemultimedia zvemukati vanofanirwa kufunga nezvezvinhu zvinogona kukanganisa zviwanikwa panguva yekusika kwavo. , senge odhiyo. Muizvi…
Kudzidzisa CAD / GIS, kuororwa
Purogiramu yakanaka yekuchengetedza skrini uye kuronga vhidhiyo
Mune ino nyowani 2.0 nguva, matekinoroji akachinja zvakanyanya, zvekuti vanotitendera kuti tisvike nzvimbo dzaimbove dzisingagone. Parizvino mamirioni ezvidzidzo anogadzirwa pamisoro mizhinji uye yakanangwa nemhando dzese dzevateereri, nekufamba kwenguva zvave kudikanwa kuve nemidziyo inochengetedza zviito zvatinoita ...
Isa mepu muExcel - tora geographic coordinates - UTM zvinongedzo
Mepu.XL chikumbiro chinokutendera kuti uise mepu muExcel uye uwane zvinongedzo kubva kumepu Iwe unogona zvakare kuratidza runyorwa rwemashure uye marefu kumepu. Maitiro ekuisa mepu muExcel Kana Chirongwa chaiswa, inowedzerwa seyekuwedzera tebhu inonzi "Mepu", ine mashandiro e ...
Google Earth Office kuti zvinouraya
Cartography, Google pasi / mamapu, kuororwa
TopView - Kunyorera kwekuongorora uye topographic stoutout
Mazuva ese tinoona kuti zvido zvedu zviri kuchinja uye kuti nekuda kwezvikonzero zvakasiyana isu tinomanikidzwa kuwana akasiyana PC Software, GPS, uye Zvitoro Zvese, imwe neimwe iine chirongwa chakasiyana, nedikanwo yekudzidza kune yega system, uye mune isu tine data kusapindirana kuri kazhinji kusingakwanise kupfuudza iyo ...
VanaChiremba vezvirwere zvese
GPS / Equipment, kuororwa, topografia
Geofumadas inokukoka iwe kuti uzive mabhuku eIndaneti paIndaneti yeSIGN Spain!
Zvekare: Kuchengeta zvese zvinoenderana nejogirafi uye nekuvandudzwa kwemifananidzo munyika imwe neimwe kwagadzira kugadzirwa kwemasangano ehurumende ari pamusoro pebasa rakakosha iri. Mune zvimwe zviitiko zvinoenderana nebazi rezveDziviriro kana imwewo zvinoenderana nesangano remukati chati yenyika imwe neimwe, iyi mhando ...
Cartography, Internet uye Blogs, kuororwa
Simple GIS Software: GIS ne $ 25 nemhosva uye paWeb server kuti $ 100
Nhasi tiri kurarama mune zvinonakidza zviitiko, mune yemahara uye zvinezvivakwa software zvinogara pamwe, zvichipa kune indasitiri mumamiriro ekukwikwidza ayo ari akaenzana mazuva ese. Zvichida nyaya ye geospatial ndeimwe yeminda umo mhinduro dzakavhurika sosi dzakasimba sedzisina rezinesi mhinduro; asi,…
Featured, Geospatial - GIS, kuororwa
Microstation CONNECT Edition - Tichafanirwa kuchinjika kune iyo nyowani interface
MuCONNECT edition yeMicrostation, yakavambwa muna2015 uye yakapedziswa muna2016, Microstation inoshandura yaro yechinyakare menyu menyu interface kuburikidza neMicrosoft Office-senge yepamusoro menyu bar. Isu tinoziva kuti shanduko iyi inounza mhedzisiro yayo kubva kumushandisi aiziva kwekuwana mabhatani, sezvakaitika kune vashandisi ve ...
Nzira yekugadzira Sei Mapeji uye Usingafi muchinangwa?
Iyo Allware ltd kambani ichangoburitsa Webhu Sisitimu inonzi eZhing (www.ezhing.com), iyo iwe yaunokwanisa mumatanho mana kuva neyako mepu yakavanzika nezviratidzo uye IoT (Sensors, IBeacons, Alamas, nezvimwewo) zvese munguva chaiyo. 4.- Gadzira yako Marongero (Nzvimbo, Zvinhu, Mafaira) dhizaini -> Sevha, 1.- Taura zvinhu zvezvivakwa -> Sevha, 2.- Ratidza ...
Google Earth Mepu
Cartography, Featured, Google pasi / mamapu, kuororwa
Chinja data renzvimbo Pamhepo!
MyGeodata inoitika zvinoshamisa pamhepo sevhisi iyo inokwanisika kushandura geospatial dhata, ine akasiyana maCAD, GIS uye mafomati eRaster, kune akasiyana maitiro uye mareferensi system. Kuti uite izvi, iwe unongofanirwa kuisa iyo faira, kana kuratidza url kwayakachengetwa. Iwo mafaera anogona kuiswa imwe neimwe, kana ...
JOSM - Iyo CAD yekugadzirisa data muOpenStreetMap
OpenStreetMap (OSM) pamwe ndeimwe yemienzaniso mienzaniso yekuti ruzivo rwunopihwa nenzira yekubatana rwunogona kuvaka modhi nyowani yeruzivo rwemifananidzo. Saizvozvowo neWikipedia, danho iri rakakosha zvekuti nhasi kune ve geoportal zviri nani kuisa dura iri kumashure pane kunetseka nezvekuvandudza ruzivo rwako pachako muzvinhu ...
CAST - Iyo yemahara software yekuongorora mhosva
Kuonekwa kwenzvimbo dzenzvimbo dzematsotsi zviitiko nemaitiro inyaya yekufarira kune chero Nyika kana hurumende yemuno. KASI izita remahara software, mavara eCrime Analytics eSpace - Nguva, iyo yakavhurwa muna2013 seyakavhurika sosi mhinduro yekuongorora kweactuarial, nemapatani ...
Tora submeter kurongeka kubva kune iyo iPad / iPhone
Iyo GPS inogamuchira yeiyo iOS chishandiso, senge iPad kana iPhone, inowana hunhu muhurongwa hwechero ipi imwe browser: pakati pemamita maviri kusvika matatu. Kunze kweGIS Kit, isu tanga taona mashoma mamwe mikana yekuvandudza kunyatso kwayo, zvisinei nekuda kwekutaurirana kweshamwari, tinoona zvichinakidza kutarisa izvi ...
GPS / Equipment, kuororwa
MDT, Chigadziro chakakwana chekuongorora nekugadzira michina
Iine vanopfuura vashandisi ve15,000 munyika makumi mashanu uye inowanikwa muchiSpanish, Chirungu, ChiFrench nechiPutukezi pakati pemimwe mitauro, MDT ndeimwe yemashandisirwo echiSpanish-ekutaura mavambo anonyanya kukosheswa nemakambani akakumikidzwa kune geoengineering. APLITOP ine mhuri ina dzekushandisa mune yayo portfolio: topographic mapurojekiti, kumunda kunyorera nezvizere zviteshi ...
AutoCAD kosi My First Impression
AutoCAD-AutoDesk, Featured, Engineering, kuororwa, topografia
BlogPad - WordPress Mhariri yePadad
Ini ndazopedzisira ndawana mupepeti wandinogutsikana nawo kubva kuIpad. Kunyangwe kuve WordPress iri rakakurumbira blogging chikuva, uko kune emhando yepamusoro matemplate uye plugins, kuoma kwekutsvaga yakanaka mupepeti kwagara kuri dambudziko. Zve desktop handisati ndawana chinhu. Ndakaedza BlogPress, WordPress yeIOS, Blog Docs, ...
Apple - Mac, Internet uye Blogs, kuororwa
peji 1 peji 2 peji 3 peji Next
Inventor Nastran Nzira
Autodesk Inventor Nastran chirongwa chakasimba uye chakasimba chekuenzanisa matambudziko einjiniya. Nastran injini ...